SEO & amp; I-Digital Marketing - Un Aperçu Magistral De Semalt
SEO & I-Digital Marketing - Un Aperçu Magistral De Semalt
Cinga ukuba ube ne-magasin sans aucune form of signalisation. Au mieux, des personnes curieuses can venir uhlole iziveliso okanye umyalelo weemveliso ezingenakuqhathaniswa ne ce que vous vendez. Kodwa uyenze ukuba unayo indawo yokuthengisa kunye neenkcukacha zezinto ezikulo mveliso? Cela inciterait kubaxhasi abanokubakho kwi-s'enregistrer, kwi-poser des questions sur les produits et even à acheter ezinye iimveliso. Ezi mbono ziyakwazi ukufumana i-passer le mot sur votre magasin et vos produits à d'autres personnes, ce qui se traduit par un trafic plus élevé ainsi que des ventes. Le ngqungquthela yesibonelo ifana ne-site engasetyenziswanga ngeli xesha isibini sibonelele ngesayithi ehlelwe kakuhle.
Le ngqununu yongcali iSemalt , U-Andrew Dyhan, uchaza ngokucacileyo i-strategy eyokudibanisa iinkqubo ze-SEO kunye ne-numérique yokuthengisa.
Ukusetyenziswa kwe-moteur de search (SEO) yile nkqubo yokubuyisela indawo elula ukuyifumana, elula kwi-classer kunye ne-explorer - logo maker design. Inqanaba le plus fondamental, i-optimisation help les consommateurs ukuba iifumaneke phakathi kwezigidi okanye izigidi zezinye iinkampani kunye ne-part intégration yazo zonke i-digital strategy marketing .
SEO ufune ukuqhuba abasebenzisi kwi-entreprise yakho ngokusebenzisa iifomati ze-online. Dlulisa le ngxaki, iwebhusayithi yeWebhsayithi kufuneka uhlasele phezulu kwiphepha le-results de moteur de recherche (SERP). Dlulisa idilesi kunye ne-easy-to-understand, qhawula umzekelo ngefa:
Inyanga nganye, i-plus ye-14 bhiliyoni yophando kwi-intanethi. Okwangoku, cingela oko kuvela kwi-fraction ye-14 bhiliyoni yophando lwenkampani yakho yophando..Dlulisa i-trafic efanelekileyo kwi-site yakho, i-enterprise kufuneka ilandele i-classer kakuhle kwi-SERP, umrhumeli ngokubhekiselele kwimisebenzi kunye nokuthengisa i-médias sociaux.
Phalazela ukuba u-enterprise prospère, ityala kufuneka ikhangele i-publicité. And pour tout entreprise en ligne, le réferencement est l'équivalent de la publicité gratuite. Ukulungiswa kwe-site yakho kwenza kube lula ukuhlula kwi-page yokuqala ye-SERP.
Nangona i-croyance commun que les gens scannent et examiner les 2 premières pages ze-SERP, le rankings on the first page give you a unique option of being searched by desperate people. ukuthenga iimveliso.
Iingxelo zisebenza njani le réferenti?
Ii-robots zeenjini zokukhangela zisebenzise i-text for determer le contenu de la page. Ii zifezekisa inani elithile lezinto ezenza iziphumo zophando, eziquka ukuhlola, ukuhlalutya kunye nokuqhotyoshelweyo, kunye ne-evaluation ye-pertinence et du rétablissement. Iintetho zeenkcukacha zityhumela inxaxheba kwi-score score:
I-URL kunye neegama zeewebhu Iwebhu
Dlulisa iindlebe malunga neengcamango zalo mjikelezo osebenzayo, kubalulekile ukuba ungene kwi-details kwi-mode dont function le réferencement:
Emva kokuba i-araguée iphelile, la maphepha agcinwe okanye afakwe kwi-imeyli ye-géante apho i-information pertinentes ifakwa rhoqo xa umsebenzisi engena kwi-key-clé ngokukhethekileyo kwi-engines de search.
3. Umsebenzi wophando:
Ngexesha elide unomculo uphendule, i-moteur de recherche yenza into enxulumene nesicelo kunye le fom le-content index. la maphepha kunye neenkcukacha ezihambelanayo neenkcukacha ze-data, kunye ne-clé saisi kwi-SERP.
Oku ku-tool de diagnostic conçu ukuhambisa i-passer au crible les mots-clés et les URLs catalogués avec des phrases pertinentes. Ucinga ukuba iimpendulo zenza izimpendulo kwaye zibuyisele emaphepheni amaphepha kunye negama okanye le ngcaciso xa ufaka. I-Fondamentally, ikhona i-algorithmes ezintathu: ii-algorithmes kwi-site, ngaphandle kwesiza kunye nendawo yonke.
Udidi lwe-algorithme nganye luhlola iintlobo ezahlukeneyo ze-Web page, kunye nezixhumanisi, i-metabalises, i-densité de mots clés et les balises of title. Ukukhusela ii-engines de search eziqhubekayo zokulungisa i-algorithmes, u-devez u-tenir au courant des changements ukuze ugcine ii-classements élevés.
Isiphumo sokugqibela senkqubo siyabonakala kwiziphumo zophando.
Uninzi lwabantu abacinga ukuba akukho mfahluko phakathi kwe-SEO ne-marketing digital, ukucacisa oko, kubalulekile ukuba uhlolisise kunye ne-profondeur. Le référencement ifuna ukuzisa iziphumo zeengxelo. Ngenye indlela, i-digital marketing iyasebenza kwi-online holistic d'un enterprise ehamba phambili kwi-optimization des moteurs de search. Dlulisa uncedo un enterprise en ligne ukuze uphumelele, ufanele usebenzise indlela yokuthengisa ye-digital ethengisekayo kwaye ufake i-strategy ye-referencement effectiveness.
I-SEO-Intengiso yokudibanisa idijithali
Ezinye iingcali ezithengisayo zibhekiselele kwi-referencement complet njenge-digital numérique integrated. De plus en plus, i-referencement ishintshe malunga nombono wohlaziyo lwe-digital digital. Dlulisa umyalezo, qhafaza usebenzise i-SEO iguqule au fil des ans. Izixhobo ezazisisebenzisayo kwiminyaka engama-90 okanye ngo-2011 ziye zenzeke ezi zinto ezifunayo. Ngamhlanje, kuninzi kunye nezinto eziye zisebenzise ukutshintshisa i-referencement, yenziwa kunye nama-sociaux et les liens renputés contrairement au passé..
I-efficacy ye-referencement efficacy
Dlulisa i-bon bon système de réferencement, ufanele ubeke i-strategy ye-SEO esebenzayo. I-Une bonne strategy iquka:
1. Isiphumo seMatshi:
I-SEO esebenzayo ayifuni nje ukuthululela i-traffic yakho kwi-site yakho, kufuneka iluncedo ekuncediseni i-data desmographies zabaxumi kunye neemeko zemihlaba ukuze uqinisekise ukuba uqinisekise ukuba uphendule imibono yakho.
2. Indlela yokuhamba yeselula:
I-Google ifuna ukuba iiWebhsayithi ze-intanethi zidibanise iifowuni zee-mobiles kwaye zenze ukwaneliseka kwababasebenzisi bezi zixhobo, njenge-users des ordinateurs.
3. Okunye ongakhetha kuzo kwii-motors de search:
Dlulisa i-plus effectiveness, indawo yakho ayikufanele i-bien faire dans un moteur de recherche, mais à travers d'autres motors de recherche.
Gxininisa ingqwalasela yakho kwi-identification kunye nokusetyenziswa kwamaqhosha eempawu ezichaphazelekayo ezixhomekeke kwimithombo yeenkcukacha ezixhomekeke kwi-intanethi.
5. I-Contenu de quality kunye newebhsayithi ecacileyo:
IWebhsayithi yakho kufuneka ifumaneke ngokuchanekileyo ekusebenziseni izixhobo zabasebenzisi, ngokucacileyo ukuthulula i-naviguer kwaye kufuneka ufumane i-content quality.
Ekupheleni kwee-akhawunti, kwi-global de l'évolution des algorithmes, ufanele ukwazi ukuba i-referencement est un processus sans fin. Dlulisa uncedo kuwe ekuphumeleleni kwimimiselo yezo zonke iinguqulelo, cinga kwi-target yakho yomphakathi, imilinganiselo yeendlela zokwenza usebenze kakuhle kunye ne-reflechissez à la convivialité de votre site.